Hojiin Mootummaa Ameerikaa Hangi Tokko Amma Iyyuu Cufataa Dha
Amajjii 09, 2019
Prezidaantiin US Doonaald Traamp fi hoogganoonni dimokraatotaa kanneen Kongresa keessaa kaleessa TV irratti yaada kennaniin gam lamaanuu tattaaffii nageenya daangaa ni deggeru baasii jiru ilaalchisee garuu yaadi isaanii wal irraa fagoo jira.
Danqaan garee lamaan gidduu erga Muddee 22 qabee hojii mootummaa federaalaa nuusa ta’e akka cufamuuf sababaa ta’e.
Traamp White House irraa akka dubbatanitti baasii hededa daangaa ijaaruuf oolu raggaasisanii hojiin mootummaa deebisee akka banamu gochuun dhimmi dimokraatotaa ti jedhan. dhimmi isaa wal ga’ii hatattamaa tokkoon furamuu dandaa’a jedhanii hoogganoota Kongresii keesa jiran har’a mariif waamanii jiru.
Afaan yaa’iin mana maree bakka bu’ootaa Naansii Peloosii fi hoogganaan Senetii dimokraatotaa Chuck Schumer wal ta’uun haasaa Traampiif deebii kennaniin seera tumtoonni hojiin mootummaa akka banamuuf nageenya daangaaf baasiin raggaasisan jira jedhan.
Hojiin kun dhaabatee itti fufuun yoo Traamp baasii doolaara biliyoona 5.7 ededa daangaa Meksiikoo waliin jiru ijaaruuf gaafatan yoo dhiisuu didan qofa. Kun immoo milkaa’ina waan hin qabaannee fi qaalii dha jedhan.
Hiriira Yuunivarsitii Finfinnee keessatti geggeeffame
COVID fi Walitti Bu’iinsi Tokkummaan Mootummootaa Gargaarsa Namoomaa Guddaa Akka Gaafatu Dirqisiise
Yunaayitid Isteetis Muddamni Raashiyaa fi Yukireen Gidduu Akka Tasgabbaa’u Gaafatte
Ministriin Haajaa Alaa Yunaayitid Isteetis Gita Isaanii Kan Raashiyaa Waliin Mari'achuuf Jiru
Loltoonni Ugaandaa Ripaablikii Dimoktaatawaa Koongootti Bobbaafaman
Nuti lammiiwwan Itiyoophiyaa yoo wal deggeree fi wal gargaarre rakkoo nuti irra hin aanne hin jiru: Atlet Daraartuu Tulluu